Tababare, Jurgen Klopp ayaa daboolka ka qaaday farriin qoraal ahayd oo uu ciyaartoydiisa u diray kaddib kulankii guul-darrada weyn ee fadeexadda ahi kasoo gaadhay ee ay Aston Villa ku karbaashtay 7-2.
Klopp oo ay kooxdiisu isku diyaarinayso inay kasoo kabato guul-darradaas ayaa waxay Sabtida la ciyaarayaan Everton oo hoggaanka horyaalka haysa, waxaanay jamaahiirtu sugayaan sida ay uga falcelin doonaan khasaaraha ugu dambeeyey.
Saddexlay uu Ollie Watikins ka dhaliiyey, Jack Grealish oo laba ku daray iyo John McGinn iyo Ross Barkley oo usii raaciyey ayaa waxay Liverpool ka dhigeen sidii koox heerka labaad ah oo aan u diyaarsanayn inay Premier League ka ciyaarto, waxaana labadooda gool ee aan waxba ciyaarta ka tarin u dhaliyey Mohamed Salah.
Warbaahinta ayaa raadinayay jawaabta uu Jurgen Klopp ka bixiyey guul-darrada, gaar ahaan wixii u khaaska ahaa isaga iyo ciyaartoydiisa ee ay isku yidhaahdeen kaddib kulanka.
Jurgen Klopp oo la weydiiyey wixii uu ciyaartoydiisa u sheegay kaddib kulankaas ayaa yidhi: “Habeenkii ciyaarta ka dambaysay muu ahayn habeenkii ugu fiicnaa noloshayda, laakiin markii aan soo kacay subaxnimadii waxa aan ogaaday inay tahay inaan la hadlo ciyaartoyda, laakiin warbaahinta horteeda maaha.
“Waxa aan u diray qoraal dheer-dheer oo farriin ah. Waxa uu si fiican u sharraxayay fikirayga wixii dhacay, intaa wixii ka dambeeyeyna waxaan dareemay fiicnaan sababtoo ah laga bilaabo waqtigaas waxa aanu sii wadi karnay shaqada, taas ayaananu samaynay.”
Klopp waxa uu intaa kaddib ka hadlay ciyaarta Everton ee Sabtida, waxaanu yidhi: “Waxa aanu helnay waqti nagu filan oo aanu kaga soo kaban karayno guul-darradaas. In lagaaga badiyo 7-2 way xun tahay laakiin mararka qaarkood waa faa’iido. Waxa aanu haysanaa fursadda aanu isku muujino waqtiga qadada ee Sabtida oo aanu Everton la ciyaarayno.”